Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Soosaarayaasha Alaabada Shiinaha - Qeybta 4
Y nooca IV kateetarka
Moodooyinka: Nooca Y-01, Nooca Y-03
Tilmaamaha: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G iyo 26G
Kateetarka toosan ee IV
IV Kateetarka waxaa badanaa loo isticmaalaa gelinta nidaamka xididdada durugsan ee caafimaad ahaan soo noqnoqoshada / ku-shubista, nafaqada waalidka, badbaadinta xaaladaha degdegga ah iwm. Kateetarka faleebada ayaa xiriir la leh bukaanka. Waa la hayn karaa 72 saacadood waana xiriir waqti dheer ah.
Maaskaro caafimaad oo wajiga loo isticmaalo hal mar
Maaskarada wajiga ee la tuuri karo waxaa laga sameeyaa laba lakab oo dhar ah oo aan tolmo lahayn leh xirmo neefsasho ah, oo ku habboon isticmaalka maalin kasta.
Waxyaabaha wajiga lagu daboolayo ee wajiga lagu tuuri karo:
Cadaadiska neefsashada oo hooseeya, shaandhaynta hawo ee waxtarka leh
Isku laab si aad u sameysid booska neefsashada saddex-geesoodka ah ee heerka 360
Naqshad gaar ah oo loogu talagalay Dadka Waaweyn
Maaskaro waji caafimaad oo loogu talagalay hal adeeg (cabir yar)
Naqshad gaar ah oo loogu talagalay Ilmaha
Maaskaro qalliin caafimaad oo loogu talagalay hal adeegsi
Maaskarada qalliinka ee caafimaadka ayaa xannibi kara walxaha ka weyn 4 mikroone oo dhexroor ah. Natiijooyinka baaritaanka ee shaybaarka xiritaanka maaskaro ee isbitaalka ayaa muujinaya in heerka gudbinta ee maaskarada qalliinka uu yahay 18.3% oo ah walxaha ka yar 0.3 microns sida ku cad heerarka guud ee caafimaadka.
Maaskaro qalliinka caafimaadka qalliinka:
Lakabka dharka meltblown ee microfiltration: iska caabinta bakteeriyada boodhka wasakhda hawada wasakhda hawada iyo kiimikada
Lakabka maqaarka aan tolnayn: qoyaan nuugista
Lakabka dharka aan jilicsanayn ee jilicsan: caabbinta biyaha dusha sare ee gaarka ah
Suufka aalkolada waa shey wax ku ool ah, halabuurka uu ka kooban yahay 70% -75% aalkolada isopropyl, oo leh saameynta jeermiska.
84 jeermi-dile oo leh nooc ballaaran oo jeermis-dilis ah, oo aan firfircooneyn doorka fayraska
Kani waa atomizer guri yar oo leh cabbir isu eg iyo miisaan fudud.
1.Waxaa loogu talagalay dadka waayeelka ah ama carruurta leh difaac liita oo u nugul cudurada neef mareenka ee ka dhasha wasakheynta hawada
2.Uma baahnid inaad aadid cisbitaalka, toos ugu isticmaal guriga.
3.Waa ku haboon tahay in la baxo, waxaa loo isticmaali karaa wakhti kasta
Badeecadan waxaa loo isticmaalaa hababka kalkaalinta ee daaweynta hemodialysis. waxay inta badan ka kooban tahay saxan caag ah, shukumaan nadiif ah oo aan tolmo lahayn, suufka iodine, faashad, tampon nuugaya adeegsiga caafimaadka, galoofyada cinjirka ah ee loogu talagalay isticmaalka caafimaadka, cajalad dhejis ah oo loogu talagalay isticmaalka caafimaadka, duubis, jeebka balastarka sariirta, faashad nadiif ah suufka.
Yaraynta culeyska shaqaalaha caafimaadka iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee shaqaalaha caafimaadka.
Xulo qalab tayo sare leh oo la xushay, moodooyin badan oo ikhtiyaari ah iyo qaabeynta qaabab dabacsan sida ku xusan caadooyinka isticmaalka daaweynta.
Moodooyinka iyo tilmaamaha: Nooca A (aasaasiga ah), Nooca B (u heellan), Nooca C (u heellan), Nooca D (shaqooyin badan), Nooca E (qalabka kateetarka)
Xidhmada kateetarka xididka dhexe (sifeynta)
Moodooyinka iyo tilmaamaha:
Nooca guud, nooca badbaadada, baalka go'an, garabka la dhaqaajin karo
Nadiif sare, aan isku ururin.
Wax soosaarka heerka fasalka Caafimaadka, xakamaynta bakteeriyada adag, endotoxin iyo maadada culus ee birta, si wax ku ool ah u yaraysa caabuqa kaadi-saarista.
Tayada xasilloon, fiirsashada saxda ah ee elektroolka, hubinta amniga isticmaalka kiliinikada iyo si weyn u wanaajinta tayada sifaynta.
<< <Hore 12345 Xiga> >> Bogga 4/5